musha > Travel Europe > Top Tips To Travel Europe By Train In 2020
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 31/03/2021)
Vatariri kumativi Europe rails chinhu dzakaita makore dzichipiwa tsika kuti haasi kuenda kukurumidza – Zvitima ndivo uchitsanya, yakanyanya eco-hushamwari, uye nzira inoshanda kwazvo yekufamba kubva panzvimbo kuenda pane imwe nzvimbo. Kunyange zvedu chitima tikiti hurongwa anotora kurwadziwa kubva kuronga chitima yeutorwa, yakawanda kuronga uye gadziriro masaridzwa. Kukubatsira kuronga akakwana rwendo akapoteredza Europe, pano vari yedu pamusoro mazano kufamba Europe nechitima.
Plan your route when you Travel Europe nechitima
Kuenda kuEurope nechitima mu 2020 zvakakosha kuti ufunge nezvekuronga nzira yako uye kuti inguvai yauchazoshandisa pane imwe neimwe nzvimbo. kana Amsterdam, Berlin, London, Milan, Paris, uye Venice dziri Mhedziso yako vanofanira-anoona mazita, edza kupfuura musoro nzira kuchazviita. Nyora nzvimbo uchida kuona uye kuti nzira unogona nehasha kuronga rwendo rwenyu. Sarudzai mazuva ako uye kuti mazuva mazhinji yamuchapedza neimwe nzvimbo kupedzisa yako nzira avaiita.
Havaedzi arongedze avaiita wako dzokugara vakawandisa
One of the worst things you can do when you Travel Europe by Train is to try and fit in too much. Pane dzinongoitika kuda kuedza uye jamhu maguta akawanda uye nyika sezvinobvira kupinda rwendo yenyu, zvisinei, hapana pfungwa kuendesawo rwendo kana usiri kuenda kuona rimwe kuenda zvakanaka! kurongedza zvakare dzokugara dzakawanda kupinda avaiita yako kunogona kudhura uye ungadzivisa yenyu zororo rive akamhanya kuti hotera Check-dzi uye tarisa-outs.
It kukosha kunakidzwa mumwe kumisa zvizere pane kuedza uye anoenderana akawandisa. Muchaponesa pamusoro kutakura uye kuwana nguva yakawanda kuongorora nzvimbo dzako.
Kana kuronga kwako nzira kuti Travel Europe nechitima, iva nechokwadi kuti kutarisa mari kunyika. Kwete nyika dzose Europe anoshandisa Euro. Kunyange dzimwe nhengo EU, akadai Bulgaria uye Croatia, vachiri kushandisa pachavo mari yavo inova wakananga kunyika yavo. Check out aya Euro uye vasiri Euro nyika.
Iyo posvo yakagovaniswa naKutsanya Mari Yemari Shanduro (@currencyconverterapp)
Book slaapplek pachine
Kunyange zvichibvira kuti bhuku mumahotera uye hostels sezvo iwe kuenda panzvimbo nenzvimbo, isu zano ukaedza nepaunogona kuti haana kusvika kupi zvako pasina pokugara yakasimbiswa. Edza bhuku rako hostels/hôtels pachine wokutanga munhu maguta matatu, kunyanya dzakakurumbira maguta panguva yakakwirira mwaka akafanana Berlin uye Prague. Events, zvakaita se mitambo mumaguta, uyewo zvine zvazvinoita Kuwanikwa. Not kunetseka pekugara nzira unogona kupedza nguva yako kuita zvinhu zvakawanda, zvakafanana dzinoyevedza uye kunakidzwa vakasununguka nguva yako!
Afternoon napo – Travel Europe nechitima
Kana chete kuronga pamusoro kupedzera chete zuva rimwe guta, edza kuwana ikoko usiku chitima. Haudi kuti kupedza nguva yako masikati vaifamba Nokuratidza usiku chitima, unogona Chengetedza mari pamusoro pekugara uye kuva nenguva yakawanda kuongorora kwauri kuenda. Kana Réservation kwenyu usiku hwese chitima tikiti nechokwadi kuti aone zvinotora nguva yakareba sei kuti panzvimbo imwe neimwe.
Taura kuvanhu pamwe wako Travel Europe nechitima
Iva nechokwadi kuti kutaura veko kana vamwe pamusoro wako chitima rwendo. Mashoko kuti achakupa unogona kuva chinokosha kupfuura chero uchawana ari mutungamiriri kufamba. Nokutaura nevamwe, unogona zano pamusoro yakanakisisa nzvimbo kudya, kuenda kutamba, matombo anokosha akavanzwa, hukuru dzinoyevedza nzvimbo, uye nyore nzira kuti famba.
Uri kuronga Travel Europe nechitima 2020? Get akatanga nokuramba kusvika musi nezvakanakisisa chitima tikiti inopa yedu Facebook uye Twitter mapeji kana kutishanyira Save A Train paIndaneti nokuti unbeatable chitima fares muEurope
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-tips-travel-europe-train-2018%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / haulla kana / kuti ru uye mumitauro yakawanda.